Momba anay - Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd.
Shijiazhuang Sothink Trading Co., Ltd., natsangana tamin'ny 2011, dia orinasa manokana manarona ny faritry ny vokatra ahitra artifisialy. Ny vokatra lehibe anananay dia ny ahitra artifisialy ho an'ny Landscaping sy ny baolina kitra / soccer. izahay koa dia manome vokatra hafa momba ireo faritra voalaza etsy ambony ireo, toy ny kasety iarahana, scoreboard LED, granules vita amin'ny fingotra, sns.
Amin'ny maha orinasa manondrana ankapobeny antsika, izahay koa dia mifampiraharaha amin'ny fitaovana sy fitaovana fananganana isan-karazany, toy ny fantsom-boribory sy fantsom-boaloboka, ravina aliminioma, coil PPGI / galvanized, harato tariby, fantsika, visy, vy tariby, sns.
Androany, ny vokatrao rehetra dia aondrana any amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, toa ny Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Eropa, Azia atsimo atsinanana, Moyen Orient, ary Afrika.
Ny tanjonay dia ny hanolotra ny mpanjifanay vokatra avo lenta amin'ny serivisy tsara sy haingana. Nanangana ny rafitra QC azo antoka sy feno izahay, izay misy fividianana akora, famokarana, fizahana ary fonosana fandefasana.
Raha liana amin'ny vokatrao ianao dia mifandraisa aminay raha mila fampahalalana amin'ny ho avy. Ny fanontanianao dia hankasitrahanay tanteraka. Izahay manome toky anao fa hamaly haingana sy ny vidin'ny fifaninanana.
F: Ahoana ny fandoavana?
1. Lazao aminay ny tena refy sy ny haben'ny baiko alainay. Manonona teny nalaina ho anao izahay.
2.Raha tsara ny zava-drehetra dia manamboatra PI ho anao izahay. Avy eo azafady mba andoavana ny 30% amin'ny totalin'ny kaontinay.
(ekentsika ny T / T, Western Union, L / C, sns)
3.Rehefa mandray ny fandoavam-bola 30% izahay, dia hamokatra ny entana ho anao.
4.Raha vitanay ny vokatra dia halefanay aminao ny sary hanamarinana sy hanamafisana.
5.Raha tsara ny zava-drehetra dia handefa entana izahay ary hanome kopia B / L anao.
6.Rehefa mahazo ny sandan'ny fandanjana izahay dia handefa B / L aminao izahay, afaka maka ny entanao ianao.
F: Mandoa vola aminao aho, milamina ve izany?
Orinasa mpivarotra entana matihanina izahay. Mandray anjara amin'ny Canton Fair isan-taona. Ny laza no fiainantsika. Ny fandoavanao dia azo antoka 100%.
F: Inona ny DTEX?
A: lanjan-damba isaky ny iray alina metatra
F: Manana fiainana voafetra ve ny ahitra artifisialy?
A: Manana fiainana lava maharitra 8-10 taona izy. Ny ahitra artifisialy dia vokatra sentetika miseho ivelany. Miaraka amin'ny asan'ny anti-UV dia manome antoka ny mpampiasa hatramin'ny 8 sy 10 taona ny ahitra. Ny fampandrosoana ny fibre ahitra amin'ny ahitra artifisialy dia mandroso mandroso, ka manome fanoherana bebe kokoa ny akanjo sy ny fisaka ny kofehy. Ka ilaina ny misafidy ahitra artifisialy avo lenta rehefa mividy.
F: Manondraka ny ahitra artifisialy ve ny rano?
A: Ie. Raha ny marina, ny ahitra dia namolavola manokana ny lavaka fanariam-pako napetraka tsy tapaka manerana ny turf mba hiantohana ny fitetezana rano haingana sy mahomby ary tsy milomano eny ambonin'ny.